Maqaalka Larizza de Vera ee Martech Zone
Maqaallada by Larizza de Vera
Larizza waa qoraa madaxbanaan oo ku nool Filibiin. Waxay qortay dhowr maqaal oo loogu talagalay wargeyska Asia Journal, waxayna dhowaan la shaqeysay shirkad sharciyeed oo loo yaqaan 'Intellectual Property Law' oo xarunteedu tahay Singapore iyo qorshayaal ku aaddan mustaqbal mustaqbalkiisa sharciga IP.
Sabtida, Oktoobar 31, 2020 Sabtida, Oktoobar 31, 2020 Larizza de Vera
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaa jiray isbadalo waaweyn oo ku saabsan habka aan ugu isticmaalno internetka suuq geynta dijitaalka. Waxaan ka bilownay kaliya sameynta degel illaa hadda aan ka faa'iideysano xogta iyo howlaha isticmaaleyaasha. Iyada oo loolanka adag ee ka socda goobta dhijitaalka ah, lahaanshaha degelku si fudud uma jareyn doono. Suuqgeyaasha dijitaalka ah waa inay kor u qaadaan ciyaartooda si ay uga dhex muuqdaan muuqaalka maanta isbeddelaya. Suuqgeynta adduunka dhijitaalka ah aad ayey uga duwan tahay tan
Tilmaame loogu talagalay suuqleyda ku saabsan hantida aqooneed (IP)
Axad, Oktoobar 11, 2020 Sabtida, Oktoobar 10, 2020 Larizza de Vera
Suuqgeyntu waa hawl joogto ah. Haddii aad tahay shirkad ganacsi ama ganacsi yar, suuqgeyn ayaa ah dariiq muhiim u ah in ganacsiyada la sii wado iyo sidoo kale in laga caawiyo ganacsiyada sidii loo gaari lahaa guul. Marka waxaa muhiim ah in la ilaaliyo lana ilaaliyo sumcadda sumaddaada si loo sameeyo olole suuq-geyn siman u leh ganacsigaaga. Laakiin ka hor intaan lala imaan olole suuqgeyn istiraatiiji ah, suuqleydu waxay u baahan yihiin inay si buuxda u ogaadaan qiimaha iyo sidoo kale kan